अमेरिकाले पुटिन परिवारभित्रै हात हाल्यो, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
अमेरिकाले पुटिन परिवारभित्रै हात हाल्यो, कसरी घट्यो घटना ?
वासिङ्टन। अमेरिकाले झन्डै डेढ महिनाअघि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रूसविरूद्ध थप आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। युक्रेनको राजधानी किएभनजिकैको बुचामा दर्जनौं युक्रेनीका शव भेटिएको घटनापछि अमेरिकाले रूसमाथि बुधबार थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
पुटिनकी यी दुबै छोरीको विवाह भइसकेको छ। पुटिनले सन् १९८३ मा ल्युडमिला एलेक्सान्ड्रोभ्ना ओकेरेत्नायासँग विवाह गरेका थिए । उनीहरूबी सन् २०१४ मा पारपाचुके भएको थियो। पुटिनले कहिले पनि आफ्नी छोरीहरूका बारेमा सार्वजनिक जानकारी दिएका थिएनन्।
श्रीमतीसँग पारपाचुकेपछि उनले सन् २०१५ मा आफ्ना छोरीहरू रूसभित्रै रहेको बताएका थिए। अमेरिकाले बुधबार घोषणा गरेको प्रतिबन्धमा रूसी विदेश मन्त्री सर्जेई लाभरोकी श्रीमती र छोरीलाई पनि समावेश गरिएको छ।
तेस्तै,नेटोले आमन्त्रण गरेपछि युक्रेनको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा युक्रेनी विदेशमन्त्रीले सहभागिता जनाएका छन्। सबैले उनलाई भब्य स्वागत गरे। युक्रेनी विदेशमन्त्री डिमिट्रो कुलेबाले उनको मुख्य उद्धेश्य र कार्यसूची एजेन्डा नै हतियार, हतियार र हतियार” नै भएको बताए।
कुलेबाले बिहीबार ब्रसेल्समा नेटो मुख्यालयमा उक्त कुरा बताए। नेटो र जी७ विदेश मन्त्रीहरूले बोलाएको बैठकमा उनि त्यहा पुगेका हुन् भने यस हप्ता रूस विरुद्ध प्रतिबन्धहरू र युक्रेनलाई समर्थन गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरिएको हो।
मेरो एजेन्डा एकदम सरल छ। यसमा तीनवटा मात्र वस्तु छन्। हतियार, हतियार र हतियार हो, कुलेबाले पत्रकारहरूलाई भने। युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनु नै “पुटिनलाई रोक्ने र युक्रेनको भूभागमा युक्रेनमा रूसी सेनालाई पराजित गर्ने उत्तम तरिका हो ताकि युद्ध थप फैलिन नपरोस् कुलेबाले भने।
युक्रेनी सेना र सम्पूर्ण युक्रेनी राष्ट्रले देखाएको छ कि हामी कसरी लड्न जान्दछौं। हामीलाई कसरी जित्ने थाहा छ। हामीले जति धेरै हतियारहरू पाउँछौं, त्यति नै धेरै मानव जीवन बच्नेछ, धेरै शहरहरू र गाउँहरू ध्वस्त हुनेछैनन्, र त्यहाँ थप बुचाहरू हुनेछैनन्।
कुलेबाको छेउमा बोल्दै, नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले भने, “नेटो देशहरूले तपाईलाई आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकारलाई कायम राख्न उपकरण सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्, जुन संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा समावेश छ र यो युक्रेनलाई थप सहयोग गर्न जरुरी छ।
पाकिस्तानको बिषयलाई लिएर रुस र अमेरिकाको वाकयुद्ध चलेको छ । रुसले अमेरिकाले पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मात्र नभई ‘जिद्दी’ इमरान खानलाई पाठ सिकाउने प्रयास गरेको बताएको छ ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाकिस्तानमा हालैका राजनीतिक घटनाक्रमबारे यस्ता धेरै कुराहरु विस्तृत रुपमा भनिएको छ जसले कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छन् ।
सोमबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले भनिन्, ‘पाकिस्तानका राष्ट्रपति डा। आरिफ अल्वीले प्रधानमन्त्री इमरान खानको सल्लाहमा अप्रिल ३ मा देशको नेशनल एसेम्बली विघटन गरेका थिए र त्यसअघि जे भयो ती कुराहरू रूसको जानकारीमा छन्।”
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यस वर्षको फेब्रुअरी २३ र २४ मा प्रधानमन्त्री इमरान खानको मस्को भ्रमणको घोषणा हुनेबित्तिकै अमेरिका र पश्चिममा रहेका उसका सहयोगीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि अभद्र तरिकाले आफ्नो भ्रमण रद्द गर्न अनावश्यक दबाब दिन थालेका थिए ।
“तर यसका बाबजुद पनि उनी हामीकहाँ आएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एसियाका लागि विदेश मन्त्रालयका उपसचिव डोनाल्ड लुले वासिङ्टनका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर इमरान खानको मस्को भ्रमण तत्काल रद्द गर्न माग गरे, जसलाई अस्वीकार गरियो।”
“पाकिस्तानी समाचार मिडियाका अनुसार, यस वर्ष मार्च ठ मा पाकिस्तानी राजदूत असद माजिदसँगको कुराकानीमा, एक उच्च श्रेणीका अमेरिकी अधिकारीले (सम्भवतः उही डोनाल्ड लु) युक्रेनको घटनाक्रममा पाकिस्तानको सन्तुलित प्रतिक्रियाको कडा आलोचना गरे।”
“त्यसपछिको अवस्थाले अमेरिकाले ‘जिद्दी’ इमरान खानलाई पाठ सिकाउने निर्णय गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। त्यसपछि इमरान खानको पार्टीका केही नेताहरू अचानक विपक्षीहरूसँग मिले र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो ।
जसमा अप्रिल ३ मा मतदान हुने थियो ।आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न स्वतन्त्र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने यो अमेरिकाको अर्को निर्लज्ज प्रयास हो। त्यहाँ रहेका तथ्यहरूले यसको स्पष्ट प्रमाण दिन्छन्।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री आफैंले बारम्बार भनेका थिए कि विदेशबाट उनी विरुद्ध षड्यन्त्र भएको थियो र यसका लागि पैसा पनि बाहिरबाट आएको थियो। नेशनल एसेम्बली विघटन भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन हुनेछ र हामी आशा गर्छौं कि पाकिस्तानी मतदातालाई यी अवस्थाबारे जानकारी गराइनेछ।”
रुसी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लुको उल्लेख गरिएको छ, पाकिस्तानको राजनीतिमा पछिल्लो समय उनको नाम बारम्बार चर्चामा छ । द्दड मार्चमा, इमरान खानले एक ¥यालीमा उनको सरकारलाई पतन गर्न विदेशी सहयोगमा षड्यन्त्र रचिएको बावी गर्दै आफूसँग यसको प्रमाण पनि भएको दावी गरेका थिए । ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इमरान खानले जुन प्रमाणको कुरा गरेका थिए त्यो एक कूटनैतिक पत्र थियो । पाकिस्तानी अखबार डनको रिपोर्टका अनुसार यो डिप्लोमेटिक केबल मार्च ७ मा पठाइएको थियो र त्यसको एक दिनपछि विपक्षीले नेशनल एसेम्बलीमा इमरान खान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
त्यसपछि अमेरिकाका लागि तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद माजिदले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारी डोनाल्ड लुसँग भेटेपछि यो केबल पठाएको खुलासा भएको थियो । अहिले असद माजिदलाई ब्रसेल्स पठाइएको छ भने उनको ठाउँमा मसूद खानलाई अमेरिकामा पठइएको छ।
यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट वा अन्य कुनै सरकारी निकायबाट कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक केबल नपठाएको स्पष्ट पारेको छ ।
इमरान खानले २४ फेब्रुअरीमा मस्को भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेका थिए । यो दिन राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन विरुद्ध ‘विशेष सैन्य अभियान’ लाई अनुमोदन गरे।
इमरान खान विगत २३ वर्षमा रुस भ्रमण गर्ने पहिलो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि नवाज सरिफले सन् १९९९ मा रुसको भ्रमण गरेका थिए ।मार्चमा नै युक्रेनमा रुसको आक्रमण रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव पेश हुँदा पाकिस्तान मतदानमा अनुपस्थित थियो ।
युक्रेनको मुद्दामा पाकिस्तानको आधिकारिक अडान दुवै देशले आपसी विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।